ARAG: Wiil Garaacid ku dilay Hooyadiis oo 81 jir ah Si uu Xaaskiisa uqanciyo (Subxaanallah) |
ARAG: Wiil Garaacid ku dilay Hooyadiis oo 81 jir ah Si uu Xaaskiisa uqanciyo (Subxaanallah)
Sep 18, 2017 - Aragtiyood
Hooyo Da’ ah ayaa dhimatay kadib markii wiilkeeda uu six un ugaraacay, arintan ayaana ka dhacday magaalada Alexandria ee dalka Egypt sidaaas booliska ayaa sheegay.
Haweeneydan oo aheyd 81-sano jir lagu magacaabo Zeinab as-Sayyid Mahfouz, ayaa waxaa garaacay wiilkeeda si uu uraali geliyo xaaskiisa oo cabasho ka gudbisay, waxaana uu uga tagay xaalad ay udhaxeyso nolol iyo geeri isagoo qado la’aaday xaaskiisa sidaas dadka deriska ah ayaa xaqiijiyay.
Dhiiga ka baxay hooyadan ayaa ilaa albaabka banaankiisa usoo baxay taas oo ay ugu dambeyn arkeen deriska oo markii dambe guriga jabiyay
Hooyo Zeinab ayaa dhiig baxeysay xiligii albaabka la furay waxaana si dhaqso ah loola cararay isbitaalka halkaas oo ay ugu dambeyn ku geeriyootay.
Laakiin, Markii ay wiilkii iyo xaaskiisii ogaadeen waxii ku dhacay hooyadan ayay ku fakareen iney baxsadaan laakiin hay’adaha amaanka ayaa gacanta ku dhigay, ugu dambeyn wiilka ayaana qirtay danbigaas.
Baraha bulshada dalka Masar ayaa aad loogu hadal hayaa arintan dhacday, waxaana ay dadku dalbanayaan in Hooyo Zeinab ay hesho cadaalad waxaana ay qaarkood usameeyeen qareeno udooda oo ciqaab marsiiya wiilkan hooyadiis dilay.